हरेक दिन जीवनलाई यसरी बनाउनुहोस् सफल ! – MediaNP
हरेक दिन जीवनलाई यसरी बनाउनुहोस् सफल !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:१५0
भनिन्छ बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । बिहानीको समय राम्रो भयो भने दिनभर शरीर पनि शुद्ध र तन्दुरुस्ती हुने विश्वास छ । त्यसैले आयुर्वेदमा बिहानीको समयमा शुद्ध र व्यायामलाई जोड दिनुपर्छ भनिएको हो । दिनको सुरुवात बिहानबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ विभिन्न टिप्स दिइएको छ । जसले तपाईको दैनिक जीवन मार्गदर्शक गर्नेछ ।
१. ब्रह्मा मुहुर्त
सूर्योदयभन्दा डेढ घन्टाअघि नै उठिसक्नुपर्नेछ । आयुर्वेदमा सूर्योदयको डेढ घन्टाअघि नै उठेमा त्यो शुद्ध र सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । सूर्योदयको डेढ घन्टाअघि वातावरणमा विशाल ऊर्जा हुन्छ । सूर्य उदाउनु आधा घन्टाअघि वातावरण भोर हुन्छ । यो समय आशा, प्रेरणा र शान्तिको हो । यसबेला ध्यान गर्नु निकै श्रेयष्कर हुन्छ । यो समय वातावरण शुद्ध, शान्त र सुखदायक हुनाले मनमा ताजगी उत्पन्न हुन्छ ।
२. श्वासप्रश्वासको शक्ति
आयुर्वेदका अनुसार दाहिना नासिका सूर्य पित्त र बायाँ नासिका चन्द्र पित्त हो । त्यसैले कुन नासिकाबाट श्वासप्रश्वास अधिक हुने गरेको छ, त्यसलाई ध्यान गर्नुपर्छ । मान्छेको मस्तिष्कको दायाँ भागले रचनात्मक कार्यको नियन्त्रण गर्छ । बायाँ भागले तार्किक र मौखिक कुराको नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले बायाँ नासिकाले श्वास लिएको छ भने मस्तिष्कको दाहिने भाग हाबी हुन्छ ।
३. सकारात्मक तरंगे
बिहान उठ्नेवित्तिकै हातको रेखाको हेरेर धन, ज्ञान र शक्तिको देवीको उपसना गर्नुहोस् । शरीरको जुन भागतर्फ श्वासप्रश्वास अधिक हुने गरेको छ, त्यस भागको हाथ चुम्नुहोस् र अर्को हाथलाई पनि त्यसै गर्नुहोस् । यसले चुम्बन ऊर्जा प्रदान गर्छ । त्यसपछि आफ्नो हात शरीरका विभिन्न अंगमा स्पर्श गर्दै लैजानु भयो भने यसले सकारात्मक तरंग सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ ।
४. रक्षा मन्त्र
रक्षा मन्त्रको उच्चारण गर्नु सरल र प्रभावकारी बिहानीको कार्य हो । मन्त्रोचारण गरेपछि केही समय शान्त र खाली पेट बस्नु उत्तम हुन्छ ।
५. सकारात्मक कदम
ओछ्यान छोड्ने समय नाकको जुन भागबाट धेरै श्वासप्रश्वास भएको छ, त्यसतर्फको खुट्टा जमिनमा पहिला राख्दा सकारात्मक हुन्छ ।
बिहान उठ्नेवित्तिकै चिसो पानीले कुल्ला गर्नुस् । तातोभन्दा चिसो पानीले हात, मुख, नाक, दाँत र जिब्रो सफा गर्नुपर्छ ।
७. ध्यान र व्यायाम
जब तपाईको नाकका दुवै प्वालले समान रूपमा सास फेर्न थाल्छन्, तब मात्र प्राणायाम सुरु गर्नोस् । मनलाई आफूतिर खिच्दै ध्यान एकत्रित गर्नोस् अनिमात्र ध्यान गर्न थाल्नोहोस् । सबैभन्दा राम्रो सूर्य नमस्कार हो । बिहान व्यायामबाट सुरु गर्नुभएमा तपाईको दिन सुखमय र शान्तभावले बित्नेछ ।
८. आफ्नो रेखदेख गर्नोस्
आफ्नो शरीरलाई हेरचाह गर्नोस् । हरेक दिन तिलको तेलले मालिस गर्नुहोस् । टाउको, कानपटी, हात र खुट्टामा पर्याप्त मालिस गर्नोेस् ।
९. सधैं नुहानुस्
सधैं नुहाउने बानी बसाल्नुस् । धेरै चिसो र धेरै तातो पानीले कहिल्यै ननुहाउनोस् ।
यी १० बानी बसाल्नुुस् जसले तपाईको जीवनलाई सुखमय बनाउँछ